Kismaayo News » FIIDSOOH: Masaajidka Baajuunta ee Kismaayo
FIIDSOOH: Masaajidka Baajuunta ee Kismaayo
Kn: Masaajidka Baajuunta waxa uu ka midyahay masaajidada ugu muhiimsan Kismaayo, waxa uu ku yaalaa Somali Star agteeda ama suuqa Balcad.
Dhawaan waxaa tabiney war ku saabsanaa nin ganacsade ahaa Axmed Sandheere oo lagu diley isaga oo masaajid kasii baxaya, dhab ahaantii masaajidka ma ahan masaajidka Baajuunta, laakiin maadaamaa masaajidkani uu yahay kan ugu caansan oo ay dad badani garanayaan, waxaan oga tusaale qaadanaynaa dhibaato dalka oo dhan ka jirta taasi oo gaartay heer aanan la qiyaasi karin.
Xitaa haddii aad salaada jimcaha ku tukato masaajidada, gaar ahaan masaajidkani oo ku yaala faras magaalada Kismaayo, ma arkaysid dad badan oo camiraya masaajidka, waxaad kaliya ood arkaysaa dad tiro yar oo gaarma daymoonaya, aadna u kala shakisan.
Qofka labbo jeer dhankaaga soo jaleeca waxaad u maleyneysaa in uu qorshe damacsanyahay oo marka banaanka loo boxo jiirada kuu taaganyahay.
Sida caadada ah masaajidada Soomaaliya waxaa dhex yaala naxash loogu talogalay in meydadka lagu qaado, laakiin cidna waligeed kama aysan fikirin masaafada isu dhow ee naxashka iyo meesha dadka lagu dilo oo ah masaajidka illinkiisa. Marka aad naxashka isha la raacdid, waxaa kuusoo baxaya sawir ka duwan kii masaajidka uu lahaa.
Hadda xaalada faraha ayay kasii baxday sidaba ka dhacday Garoowe dhawaan oo sheekh caalim ah masaajidka dhexdiisa maalin jimco ah lagu toogtey.
Masaajidkani waxyaabaha ku qaaska ah waxaa ka mid ah in qoowmiyada uu magaciisa watto ee muddo qarni ah gacanta ku heeysay maamulkiisa aanan hadda lagu arag hal qof oo ka mid ah oo ku tukanaya, cabsi ay ka qabaan dadka wax dila iyo dhibaatooyin kale oo loo geystey.
Xitaa waxaa naloo sheegey in imaamyadii gacanta ku yahay masaajidka ee qoowmiyadda Baajuunta ahaa maamulka ay ka wareejiyeen xarakadii Alshabaab.
Dad masaajidka ku tukanayay oo aan la hadalnay waxay soo jeediyeen haddii aanan waardiyeyaal la dhigan horta iyo hareeraha iyo gudaha masaajidada in muddo aad aan u fogeyn la arki doono masaajidada oo aysan jirin cid kusoo tukata.
Lama oga cidda ka dambeeysa dilalka qorsheysan ee dadka masaajidada loo istaagayo, laakiin waxaa xaqiiq ah weerar culus uu ku socdo asaaskii jiritaanka bulshadeena islaamka ah oo ah masaajidka, haddii aanan laga hortagani xaaladu ay gaari doonto mel aanan waxbo laga qaban karin.